शिक्षा र समाज सुधारका प्रेरक व्यक्तित्व – Sourya Online
शिक्षा र समाज सुधारका प्रेरक व्यक्तित्व
पूर्णप्रसाद मिश्र २०७६ मंसिर ७ गते ६:३० मा प्रकाशित
नेपालमै पहिलोपटक जनताको सहयोगमा संस्कृत पाठशाला स्थापना गर्नुभएका बालागुरु षडानन्दले वि.सं १९४० मा सती जान बाध्य पारिएका दुई महिलालाई मृत्युको मुखबाट बचाएर समाज सुधार आरम्भ गर्नुभयो । भोजपुर वितलवका ७० वर्षीय हरिलाल लम्सालको निधन हुँदा समवयी जेठी श्रीमती र १८ वर्षीय कान्छी श्रीमतीलाई सतीका रूपमा पठाउन बेग्लाबेग्लै डोलीमा राखिएको थियो । स्थानीयवासी नन्दीकेश्वर अधिकारीबाट यसको जानकारी पाएपछि षडानन्द लम्सालको घरतर्फ लाग्नुभयो ।
बाटो लागिसकेको शवयात्रालाई रोकी मलामीलाई दुवै महिलालाई सती पठाउन नहुने भनी उहाँले सम्झाएपछि दुई जनाको जीवन बचेको षडानन्दका विषयमा अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नुभएका प्रा. डा. गोविन्दमानसिंह कार्की बताउनुहुन्छ । षडानन्दले आफ्नी आमा रुक्मिणीको निधन भई अरुण नदीको सतीघाटमा अन्तिम संस्कारका लागि गएका बेला अरुणपारि मृतक पतिसँगै पत्नीलाई जलाएको घटना सुन्नुभएको थियो । त्यहीबेलादेखि उहाँ यो अमानवीय प्रथाको अन्त्यका लागि दृढसंकल्पित हुनुभएको थियो ।
सुदूर पूर्व भोजपुरको दिंगलाबाट बालागुरु षडानन्दले सुरु गर्नुभएको अभियानले वि.सं १९७७ मा साकार रूप लियो । तत्कालीन श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले सतीप्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्नुभयो । शिक्षासेवामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका षडानन्दले सतीप्रथा उन्मूलनका लागि राणा सरकारलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको थियो । वि.सं १९३२ मा संस्कृत पाठशाला स्थापना गरी सबै जातजातिका मानिसले पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । राजधानी सहरमा समेत राणा र उच्चवर्गीय परिवारले मात्र पढ्न पाउने त्यो बेलामा जनताको समेत सहयोग लिएर पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
सुदूर पूर्व भोजपुरको दिंगलाबाट बालागुरु षडानन्दले सुरु गर्नुभएको अभियानले वि.सं १९७७ मा साकार रूप लियो । तत्कालीन श्री ३ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले सतीप्रथा उन्मूलनको घोषणा गर्नुभयो । शिक्षासेवामा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका षडानन्दले सतीप्रथा उन्मूलनका लागि राणा सरकारलाई उत्प्रेरित गर्नुभएको थियो । वि.सं १९३२ मा संस्कृत पाठशाला स्थापना गरी सबै जातजातिका मानिसले पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुभएको थियो । राजधानी सहरमा समेत राणा र उच्चवर्गीय परिवारले मात्र पढ्न पाउने त्यो बेलामा जनताको समेत सहयोग लिएर पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको थियो
त्यसबेला आम मानिसले दैनिक उपभोग गर्ने अत्यावश्यक चिजबिजको सहज आपूर्ति थिएन । किसानले उत्पादन गरेका अनाज बिक्री गर्ने व्यवस्था नहुँदा मानिस कष्ट भोग्न बाध्य थिए । षडानन्दले दिंगला भञ्ज्याङमा प्रत्येक शनिबार हाटबजार लाग्ने व्यवस्था मिलाउनुभयो । यसले भोजपुर र सङ्खुवासभाका धेरै जनतालाई दैनिक जीवन उपार्जनमा सहजता मिलेको थियो । त्यसैबेलादेखि दिंगलामा स्थापना भएका शिवालय एवं राम, सीताका मन्दिरमा बाला चतुर्दशी र रामनवमी पर्वको मेला सुरु भयो ।
मेलामा पनि बजार लाग्ने व्यवस्था मिलाएपछि त्यस क्षेत्रका मानिसको जीवनयापनमा सजिलो भयो । षडानन्दले बगँैचा स्थापना गरेर धेरै प्रकारका बिरुवा लगाउनुभयो । त्यस क्षेत्रका वनजंगलमा प्रशस्त हुने रुद्राक्षलाई उहाँले व्यावसायिक खेती गर्न जनतालाई प्रेरित गर्नुभयो । यो खेती हाल भोजपुर, संखुवासभा र धनकुटाका विभिन्न स्थानमा भइरहेको छ र यसले अर्थोपार्जनमा सहयोग गरेको छ । डेढ सय वर्षअघि देखि वन संरक्षण सुरु गरेकैले यस क्षेत्रको पर्यावरण सुधारमा योगदान गरेको दिंगला पुख्र्यौली थलो भएका दयाकृष्ण न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
षडानन्दले वि.सं १९४० मै जगेडा वनको अवधारणा ल्याउनुभएको थियो । उहाँको सोचअनुसार स्थापना भएको वनलाई हाल विकासका नाममा वन विनाश गर्न थालेको राजधानीमा बस्दै आएका भोजपुरवासीको गुनासो छ । नेपालमै पहिलोपटक सामुदायिक वनको सोच अघि सार्नुभएका षडानन्दको यो पाटो ओझेलमा परेको इन्द्रमणि सुवेदी बताउनुहुन्छ ।
अष्ट्रेलियाली वन परियोजनाले पञ्चायतकालमा सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा सुरु गरेको अभियानलाई पहिलो सामुदायिक वनको सुरुआत भनिएकामा उहाँको आपत्ति छ । वनलाई समुदायको हितमा उपयोग गर्ने षडानन्दको योगदान बिर्सन नहुने सुवेदीको माग छ । रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोजकुमार चापागाईं षडानन्दको कालदेखि नै भोजपुर र यस वरपरका जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा भएको विकासले पूर्वी क्षेत्रको अर्थतन्त्र धानिएको बताउनुहुन्छ ।
बालागुरु षडानन्दले शिक्षा र समाज सुधारका धेरै क्षेत्रमा पु¥याउनुभएको योगदानको अध्ययन गर्न नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले अध्ययन कक्षको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिष्ठान र आबाल ब्रह्मचारी षडानन्द प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा गत आइतबार राजधानीमा गरेको ‘राष्ट्रका लागि आबाल ब्रह्मचारी षडानन्दको योगदान’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले विद्वानको समूह बनाई प्रज्ञा मातहतमै अध्ययन अनुसन्धान गराइने जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङले षडानन्दले राणाकालमै पूर्वी नेपालमा बालेको अध्यात्मको ज्योति निभेकाले त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न पनि थप अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । मन्त्रमा विज्ञानलाई ‘फेल’ गराउने ज्ञान भएकाले दिंगलाको अध्यात्मको ज्योति फेरि जगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
षडानन्दले वि.सं १९४० मा बहुआयामिक उद्देश्य समेटेको सीताराम गुठी स्थापना गर्नुभयो । गुठीअन्तर्गत विद्यालय, मन्दिर, भौतिक संरचना, धार्मिक सांस्कृतिक कामको उन्नयन एवं व्यवस्थापनका साथै ऋण प्रदान सेवा पनि समेटिएको उहाँका विषयमा अन्वेषण गरिरहनुभएका यादव चापागाईं बताउनुहुन्छ । गुठीमा तीन हजार दुई सय १७ रोपनी जग्गा राखिए पनि हाल त्यो मासिएर करिब नौ सय रोपनीमा सीमित भएको छ । राजनीतिक दाउपेचले सामाजिक हितमा उपयोग हुँदै आएको गुठी जग्गा संरक्षण हुन नसकेको स्थानीयवासी परशुराम कट्टेल बताउनुहुन्छ ।
मासिएको गुठी जग्गाको खोजीमा स्थानीय सरकार लागिपरेको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख वीरबल राईले सुनाउनुभयो । पुरातात्विक महत्वका सिँढी, राम, सीता र हनुमानका नाममा स्थापना भएका कुण्ड पनि पुनर्निर्माण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गुठी व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा गुठी शाखा नै स्थापना गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । गुठीको अध्यक्ष रहनुभएका दिंगलावासी कृष्णप्रसाद पौडेल जग्गासमेत भएकाले षडानन्दको योगदानको कदरका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ढिलाइ गर्न नहुने माग गर्नुहुन्छ ।
तीनै तहका सरकारको सक्रियतामा कृषि वा अन्य नामका विश्वविद्यालय बनाउन सकिने दिंगलावासीको माग छ । षडानन्द र योगमायालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने षडानन्द प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव लालनाथ सुवेदीले बताउनुभयो । समाजसुधारका क्षेत्रमा योगदान गर्नुभएका दुवैको योगदानको कदर गर्दै विभूति घोषणामा ढिलाइ गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।
निजगढ विमानस्थल बस्ती व्यवस्थापन चुनौती
सडक विस्तारसँगै फेरियोे भोजपुरको मुहार
दूधमा आत्मनिर्भर बन्दै प्रदेश–१
सूचना–प्रविधि पार्क ‘सेक्युरिटी प्रेस’ बन्दै
‘इन्जिनियरिङ शिक्षाका इन्जिनियर’ भित्र घोत्लिँदा
नेपाली कृषिवस्तुको मूल्य भारतीयको हातमा
चार प्रदेशमा पहिलो चरणमा निर्वाचन
आधा परिवारले जाडो छल्न गाउँ छाडे
हुम्ला जिल्ला कोरोना संक्रमणमुक्त
बाजुराका दुर्गम बस्तीमा ल्याब सेवा
तलबभत्ताबाट वडाअध्यक्षले बाँडे ज्याकेट
सरकारी जागिर छाडी कृषि व्यवसायी रमाउँदै प्रदीप